जतिसुकै बिजी भए पनी २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला ! तपाईंको सोंच मा परिवर्तन आउनेछ । |
जतिसुकै बिजी भए पनी २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला ! तपाईंको सोंच मा परिवर्तन आउनेछ ।
January 14, 2021 January 14, 2021 adminLeaveaComment on जतिसुकै बिजी भए पनी २ मिनेट समय दिएर अवश्य पढ्नुहोला ! तपाईंको सोंच मा परिवर्तन आउनेछ ।
जतिबेला तपाईंको मृ:त्यु हुन्छ त्यही समयदेखि तपाईंको पहिचान एक ला:स बन्न सुरु गर्छ । अरे … ला’स लिएर आउनुहोस्। … ला’स लाई उठाउनुहोस्। .. ला’स लाई सुताउनुहोस। . यस्तै शब्द ले तपाइँलाई बोलाउछन ति मान्छेहरूले तपाइँलाई तपाईंको नामले बोलाउने छैनन् , जसको लागि तपाईंले आफ्नो सम्पुर्ण जिबन बिताउनुभयो । फ़ेरि पनि नाच्नुहोस । ति खुशिहरु महसुस गर्नुहोस् । फोटोहरु खिच्नको लागि पागल जसरी पोज दिनुहोस् । एकदम सानो बच्चा जस्तै बन्नुहोस । किनकि मृ त्यु जिबनको सबैभन्दा ठूलो ला”स होइन । ला’स त त्यो हो , तपाईं जि’उँदो भएर पनि तपाईं भित्र जिन्दगी जिउनुको आशा हराउदै गएको छ हरेक पल हाँसी खुशी जिन्दगी बिताउनुलाई नै जिन्दगी भनिन्छ।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
जसलाई देख्न सक्दिन , उसको आवाज सुनेर पनि खुशी छु। जसलाई पाउन सक्दिन , उसको बारेमा सोचेर पनि म खुसी छु। हिजोको दिनहरू बितिसकेको छ , उसको मीठो सम्झनामा पनि म खुशी छु.भोलिको बारेमा थाहा छैन , पर्खाइमा पनि म खुशी छु. हाँस्दै खेल्दै बित्दै छ समय , आज मा पनि म खुशी छु. जिन्दगी छ छोटो , हरेक पल म खुशी छु । यदि यि माथिका लेखहरु मनमा छुयोभने जवाफ दिनुहोस्। नत्र त म बिना जवाफमा पनि खुशी छु । ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
पुरुषमा पनि हुन्छ स्तन क्यान्सर, यस्ता देखिन्छन् लक्षण !
विवाह भएका पुरुषहरु प्रति आकर्षित हुने र गोप्य सम्बन्धमा बस्न चाहने युवतीहरुको यस्ता छन् भित्री रहस्य।अनुसन्धान बाट पारित भएका तथ्यहरु
झारफुक गर्ने भनेर सबै कपडा खोल्न लगाएपछी यस्तो सम्म भयो,पुरा हेर्नुहोस
पति बाहिर भएको बेला गर्भवती भएकी श्रीमतीले दिएको बयान सुन्दा सबको उड्यो होस्।यस्तो पनि के हुन सक्ला र?